India: Namely an’i Pune ny asa fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2018 10:02 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Swahili, Italiano, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, English
Sary avy amin'ny http://twitpic.com/photos/abhi_bol
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Febroary 2010)
Tamin'ny 7 sasany hariva tamin'ny Asabotsy 13 Febroary 2010, nisy baomba nipoaka tao amin'ny trano fisakafoanana malaza feno mpizahatany any Pune, tanàna andrefan'i India, ka nahafatesana olona 9 sy naharatrana 57. Tao anaty kitapo ilay baomba ary nipoaka rehefa niezaka nijery ity entana tavela ity ny mpampandroso sakafo. Shashi Bellamkonda ao amin'ny My Digital Thoughts nitatitra hoe:
Ora vitsy lasa izay (13 febroary 2010) nisy baomba nipoaka tao amin'ny trano fisotroana kafe malaza ‘German Bakery” tany Pune India. Tamin'ny fotoana namoahana ity (hafatra ity), nitatitra ny gazety fa olona 8 no maty ary 40 teo ho eo no naratra tamin'ity fipoahana ity izay nahatonga ireo vatana may tsy hay fantarina intsony. Toerana malaza feno mpizahatany vahiny ny fanaova-mofo.
Nanana ity fandinihana ity ihany koa i Shashi:
Nitranga iray andro taorian'ny nifaneken'i Pakistan sy India hanohy ny fifampiresahana izay efa najanona hatramin'ny fanafihana an'i Mumbai tamin'ny taona 2008 ny loza. (14 volana lasa izay)
Nitsidika an'i Pune mba hanaramaso ny toerana masina Osho teo akaikin'ny toerana nisy fipoahana i David Headley izay any am-ponjan'i Chicago amin'izao fotoana
Teo akaikin'ny lapan'ny Chabad ao Pune ny toerana nisy ny fipoahana ary ny lapan'ny Chabad tao Mumbai no lasibatra tamin'ny fanafihan'ny 26 novambra 2008.
Te akaikin'ny toerana masina Osho falehan'ireo mpizahatany ny fipoahana, misy itovizana tamin'ny fanafihana an'i Mumbai tamin'ny taona 2008:
Pragmatic Euphony nampitandrina hoe:
Namely indray tao amin'ny tanibe Indianina ny jehadis; tamin'ity indray mitoraka ity dia tany Pune, na dia efa herintaona mahery taorian'ny fanafihana mahatsiravina nataon'ny mpampihorohoro tany Mumbai tamin'ny volana Novambra 2008 aza. Fahatezerana ny valinteny voalohany, tamin'ny tombatombana azo antoka sy malaza fa hoe ny vondrona jehadi ao Pakistan no nahavanon-doza. Angamba azo takarina raha ambony ny hambom-po. Ary mety hihamafy bebe kokoa ity fihetseham-po ity satria mihazakazaka ny fampahalalam-baovao mahazatra Indiana ary mitantana am-pahadalana ny fitantarany ara-virtoaly momba ny loza.
Efa nahita rohy mankany Pakistana sahady ny olona. Offstumped mampahafantatra fa taorian'ny fandrahonan'i Laskar-e-Taiba ny fipoahana tany Pune. Mpitarika ambony iray ao amin'ny Lashkar-e-Taiba niantso an'i Pune ho tanàna lasibatra nandritra ny famoriam-bahoaka nahazoan-dalana tao Pakistana. Hoy i Acorn:
Na dia eo aza ny fandrahonan'i Lashkar-e-Taiba, aloha loatra raha hanondro ny vondrona tafika-jihadi Pakistaney ho ambadik'izany. Saingy mazava fa manana ny antony rehetra hanamafisana ny fifandonana amin'i India amin'ny alàlan'ny fampiasana fampihorohoroana ny vondrona jihadi-miaramila Pakistaney. Raha tsy misy fialantsiny “fifanenjanana tany atsinanana”, tsy manana na inona na inona hazavaina amin'i Washington amin'ny [fihatsarambelatsihiny] momba ny taliban i Pakistan.
Dilip D'Souza at Death Ends Fun mampatsiahy fa tokony hanao zavatra manoloana ny fampihorohoroana ny firenena ihany koa i India :
Mandra-panekentsika ny fitomboan'ny fampihorohoroana — tsy latsaky ny zavatra rehetra avy any ivelany — ary mandra-pijoroantsika hanohitra ny karazana fampihorohoroana rehetra, dia tsy handresy ny fampihorohoroana mihitsy isika.
Feno sioka sy sioka nozaraina manaparitaka ny vaovao ny tontolon'ny Twitter. Ireto sasany amin'izany:
bhuvan_chelsea: We need a vigilante like Batman here in #India . 😉
IndiaHappening: Sivy maty, 32 naratra tamin'ny fipoahana fampihorohoroana tany Pune http://bit.ly/arLssZ #India
r_shekhawat: Namely ny tanindrazako – ‘Pune’ ny fampihorohoroana: olona tsy manan-tsiny indray no novonoin'ireo mpampihorohoro tsy misy saina. Pune, tanàna mahafinaritra, noratraina sy novonoina.
pragmatic_rebel: Fanombohana mampalahelo tokoa amin'ny andron'ny mpifankatia ao #Pune! Mbola voadona noho ny fipoahana, maniry aho mba hanao zavatra hafa mihitsy i #India amin'ity indray mitoraka ity.
bhuvan_chelsea: Mila olona mailo tahaka an'i Batman eto #India . 😉
tweetSAMRAT: Mivavaka ho an'ireo lasibatra tamin'ny fipoahana baomba tany Pune vao haingana.
nehasasi: RT @deepitganjoo: Azafady, aparitaho ity, mila rà AB+ve sy B+ve ny hopitaly Jahangir any Pune, Antsoy ny laharana: 1066 Ho an'ireo izay any Pune…. Azafady
_india_: Mampisalasala ny fifampiresahana miaraka amin'i Pakistan ny fipoahana tany Pune
Azo antoka fa hisy fiantraikany amin'ny fikasana vao haingana hanohy ny fifampiresahana eo amin'i India sy Pakistana ny fipoahana tao Pune. Saingy toa hita fa manome hery ny mpampihorohoro izany satria ambony dia ambony ny fihetseham-po hatraiza hatraiza.